Però : Ny Grevin’ny Tantsaha Ao Andahuaylas · Global Voices teny Malagasy
Però : Ny Grevin'ny Tantsaha Ao Andahuaylas
Nandika (en) i Silvia Viñas
Voadika ny 21 Novambra 2011 4:21 GMT
Ny Talata, 8 Novambra, dia niditra ny andro faha enina amin'ny grevin'ny tantsaha manohitra ny lahasa fitrandrahana ao amin'ny faritr'i Andahuaylas, ao Apurímac, Però. Ny Alakamisy, 3 Novambra, ny fikambanan'ny mpampiasa rano sy ireo faritra ao Andahuaylas ary Chincheros dia nanambara [es] ny fanombohan'ilay grevy tsy manam-petra, mitaky ny fanakatonana ny ozinina fikirakirana varahina roa ao Huaraccopata sy Tocctopata sy ny fitakiana ho laharam-pahamehana ny fikarakarana ny dobo, dobo kely, ny loharano ary ny tany mando voaloton'ny asa fitrandrahana.
Nisy ny fivoriana fitadiavana marimaritra iraisana teo amin'ny solontenan'ny mpanjifa (JUDRA) sy ny governemanta rezionaly Apurímac ny Zoma, 4 Novambra, mba hijerena ny fanapahan-kevitra horaisina saingy tsy nisy vahaolana nahomby. Mpisera Twitter Angel Ccorisapra (@angelitucha) milazalaza ny antsipiriany :
Angelitucha : Ao anaty fifanakalozan-kevitra tanteraka ny solontenan'ny JUDRA momba ny fitrandrahana amin'izao fotoana izao.
Angelitucha : Ny karazanà fitrandrahana rehetra dia naato tao amin'ny faritr'i Andahuaylas araka ny fanapaha-kevitra noraisin'ny governemanta rezionaly.
Angelitucha : Ireo Solontenan'ny JUDRA dia manohy ilay grevy, notakian'izy ireo ny fanitsiana ilay fanapahan-kevitry ny governemanta rezionaly.
Mbola voabahana [es]teo amin'ny kilometatra faha-12 teo Ny Sabotsy, 5 Novambra, ny araben'i Andahuaylas – Abancay, tao amin'ny faritra izay antsoina hoe Ramal, “Pacucha” iray ao amin'ny fokonolon'i Champaccocha ao amin'ny distrikan'ny San Jerónimo, samy tsy tonga any amin'izay alehany ny fiara mampitohy an'i Cusco sy Abancay. Ilay mpisera Twitter Yesenia (@yegris21) dia nizara tamim-panahiana ny hafatr'ilay namany mikasika ireo olana sasany izay mitranga teo amin'ireo mpanao hetsi-panoherana sy ireo mpiasa mpitatitra vokatr'ilay grevy :
@zezzzar TANY SAN JERONIMO, ANDAHUAYLAS , NAMPIDININ'NY MPANAO FIHETSIKETSEHANA NY MPANDEHA BUS MBAMIN'NY RAHAVAVIKO DIA DAROHAN-DRY ZAREO
Foara tao Andahuaylas. Sary avy aminà mpampiasa Flickr Anabelle Handdoek, teo ambany fanomezan-dalana iray Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0) license
Ny Alahady, 6 Novambra, naato ny asa fivarotana fanao amin'ny Foara Alahady ho fitandroana ny filaminana sady voabahaka koa ny arabe, ka manakana ny fahatongavan'ny vokatra ao amin ‘ilay foara. Nisy olana koa atao afovon-tananan'ny renivohitr'i Andahuaylas.
Fernando Zuzunaga, a, à ce sujet (@ratchus) diffusé quelques nouvelles qui lui sont arrivées de cette ville.
Fernando Zuzunaga (@ratchus) nizara vaovao vitsivitsy voarainy tao amin'io tanàna io :
@ratchus : Tao Andahuaylas nodoron'izy ireo ny fiara fitateram-bahoaka, nobodoin'izy ireo ny lalana, tsy misy fifanarahana azo atao, simba avokoa ny varotra androany.
@ratchus : Nobodoin'ny tambanivohitr'i Andahuaylas ny renivohitra, manohitra ny voka-dratsin'ny fitrandrahana izy ireo.
@ratchus : Mpitondra “mototaxi” iray teo ampanaovana ny asany no nosamboriny sy nodarohany, misy ny herisetra ao Andahuaylas.
@ratchus : Nanao izay nifampiraharahana tamin'ny fampitsaharana ilay hetsi-panoherana ireo manampahefana tao Andahuaylas roa andro lasa izay, nanao izay naharatsy kokoa ny toe-draharaha no vitan'izy ireo.
Tamin'ny fotoana izay nanehoan'i @Apu _Rimak ny heviny mikasika ilay grevy :
@Apu_Rimak Mihevitra aho fa tsy raharahian'ny haino aman-jery ilay izy, andro fahaefatra tamin'ilay grevy tao Andahuaylas androany, tsy nisy ny fety Alahady.
@Apu_Rimak: Esperemos que la sangre no llegue al río mañana entre el JUDRA y los “mineros artesanales” de Huancabamba – Andahuaylas – Apurímac
@Apu_Rimak : Manantena izahay fa tsy hisy ny rà latsaka eo amin'ny JUDRA sy ireo “mpitrandraka mpiasa tena ”ao Huancabamba – Andahuaylas – Apurímac rahampitso
Ny Alatsinainy, 7 Novambra, mbola tsy niova ny toe-draharaha, taminà fanadihadiana [es] (lahatsary) no nahafantaranay fa nisy mpivarotra mihoatra ny 5 arivo voakasika mivantana tamin'ilay fanapahan-kevitra noraisina ary nantsoina hitokona ihany koa ireo mpikambana ao amin'ny Sendikan'ny mpiasan'ny fanabeazana (SUTE), toy izany koa ireo any amin'ny sehatra maro hafa[es] izay nahavita nampiditra tao amin'ny fitakian'izy ireo ny ny fanesorana ireo orinasa vaventy mpitarandraka izay tokony hampitsahatra ny fitrandrahan'izy ireo, toy ny ARES SAC sy Apurímac Ferrum, ary ireo maro hafa.
Ny vokany hafa naterak'ilay grevy [es] dia ny fampitsaharana ny fandehanana an-tsekoly, araka ny fanadihadiana [es], “Hiarovana ny fahasalamana ara-batana sy ara-tsain'ny ankizy sy ny tanora ato amin'ny faritra.” Manaraka izany, ilay grevy sy ny fibahanana ny arabe dia nanomboka niantraika [es] tany an-tsenan'i Abancay, fa tsapan'ny isan-tokantrano ny tsy fisian'ny enta-madinika intsony.
Ireo mpitokona dia nangataka [es] ny hisian'ny Vaomiera Manokana mba hiresahana ny momba ny rano sy fitrandrahana ao amin'ny fari-piadidiana iandraiketany satria tsy nahafapo azy ireo ny fanapahan-kevitry ny governemanta rezionaly [es]. Momba izany indrindra, nambara fa [es] ny Ministeran'ny Fambolena dia hihaona amin'ny Fikambanan'ny Mpamboly Nasionaly mba hiresaka momba io raharaha io.
Alejandro, avy ao amin'ilay bilaogy Inquietud Chanka, dia namoaka lahatsoratra antsoina hoe “Ny fisainan'ny any Ambanivohitra” [es], izay nanambarany fa ny tolona ataon'ny tantsaha dia tolona ho amin'ny tombontsoan'ny rehetra, satria“ny resaka fandotoana ny tontolo iainana dia tsy olan'ny olona any ambanivohitra irery, fa olana ankapobeny.”
Nandritra ny efatra andro, mpamboly avy amin'ny faritra maro no nibodo ny tanànan'i Andahuaylas mba hijoroana amin'ny fangatahana ny zon'izy ireo, zo izay raha ny tena marina, dia zon'ny mponina avy ao an-drenivohitra ihany koa, kanefa ny mponina ao an-drenivohitra, noho ny hakamoana na ny hakanosana, dia tsy mba nandray anjara tamin'ilay grevy.
Mankasitraka ny fitrandrahana manara-penitra aho, izay ahitana fomba fitrandrahana ho entina ampanajana sy ampisainana kokoa, kanefa iza no nomena fihofanana manokana hampanjary izany karazàna fitrandrahana izany? Eritrereto. Ny mpamatsy vola iraisam-pirenena irery. Izay, orinasa avy any ivelany. Ny lalàna momba ny fitrandrahana dia namboarina mba ho mety amin'izy ireo. Dia ahoana izany ny momba ireo mpiasa tena, ilay antsointsika hoe tsy manara-dalàna ?, Manao izay ho afany izy ireo, mba hahazoany tombontsoa amin'izay ataony, tsy miraharaha ny hafa ary indrindra ny ny tontolo iainana. Kanefa tsy miraharaha ny fiainan'ny Peroviana mihitsy koa ny vahiny.
Mitaky amin'ny governemanta rezionaly ny tantsaha mba hitady vahaolana amin'ny fangatahan'izy ireo, indrindra ny hialan'ireo mpitrandraka izay tsy mitondra afa tsy fahalotoana ho an'ny rano sy ny rivotra. Kanefa milaza aho fa tsy olan'ny governemanta rezionaly izany, fa olan'ny governemanta nasionaly. Ny fahefana mpanantanteraka mihitsy no tokony handray fanapahan-kevitra voalohany ho fitsinjovana ny mponina.
Misy ny fanahiana [es] fa ny tsy hisy ny vahaolana malaky amin'io olana io ary ahiana hihamafy kokoa ny grevy ao anatin'ny andro vitsivitsy. Ho an'ny governemanta izay niresaka be momba ny fampivondronana araka izay tratra ny saranga sy ny fanomezana vahana ny vitsy an'isa, dia karazana fitsapana ilay izy. Na dia izany aza tsy vao izay vao nisy izany: misy tranga hafa koa mifandraika amin'ny resaka fitrandrahana sy fandotoana ny tontolo iainana, toy ny tetikasam-pitrandrahana Conga tao Cajamarca, ary efa manakaikyny hipoaka ihany koa ary hampitombo ho azy ny korontana ara-tsosialy. Mbola hampahafantarinay anareo eny ihany.
Ny lahatsoratra nadika voalohany dia nivoaka tao amin'ny Globalizado [es], bilaogy manokan'i Juan Arellano, ny 6 Novambra 2011.